izimpethu Annelid - iqembu kahle esikhulu eziphilayo ezilwane ezingenamgogodla. Ngaphezu kwalokho, yizona ezimelela ihlelwe kakhulu izibungu. Zitholakala ikakhulukazi amanzi aqabulayo nosawoti, futhi emhlabathini. Ezinye izinhlobo zawo iminyundu tropical baye bazivumelanisa imodi eliwumhlaba wempilo.
Thayipha Annelida: izici jikelele
Ubukhulu kuleli zinga iqembu kusukela amamilimitha angu ezimbalwa kuze kube amamitha ayisithupha. Izimo zethu zihluke kakhulu isici sici khona kwale izingxenye umzimba - umzimba wabo yakhiwa sebuningini izindandatho, echaza igama uhlobo. annulation sangaphandle oluhambisana segmentation yangaphakathi. Yingakho uma umzimba ilimele noma ezilimele annelid ilahlekelwa kuphela izingxenye ezimbalwa, okuyinto ngokushesha ngaba ngcono.
Ngaphandle umzimba embozwe cuticle, okungasekelwe kabusha. Kusukela likhule bristles chitin - esinye isici sobuntu bakhe lokhu iqembu izilwane. Abanye abamele kumasegmenti kungaba parapodium - kunalokho bakudala nemilenze, nakho ezimweni eziningi anemisila bristles ebucayi noma zokuphefumula.
Annelids: izici isakhi izitho zangaphakathi
Ukuze abameleli lolu hlobo libhekene khona umzimba ingaphakathi yesibili - coelom. Lokhu ingaphakathi ligcwele uketshezi oluthile, sibonga ukuthi ukusekelwa amazinga evamile imvelo yangaphakathi.
Kukhona isikhwama isikhumba-kwemisipha esakhiwa amabhola epithelium futhi imisipha zib indandatho kanye longitudinal band.
Isimiso sokugaya ukudla bungene kuyinto cross-cutting, umlomo uqala futhi aphethe ngokucela le ingquza. Annelids ukwahlukana ezintathu emathunjini - phambi, maphakathi kanye labaqaphi elingemuva. Olunye uhlobo kwakhiwa bakudala salivary nezindlala.
Breathing emzimbeni isikhumba. Okukhishwayo kuphela unesiqiniseko kwezilwane zasolwandle lapho parapodia gills elise. Njengoba for isimiso sokujikeleza kwegazi, ngokuvamile ivaliwe. Siqukethe ventral kanye amaphiko aorta, okuyinto ziyizitsha annular sixhumene. Inhliziyo e la magciwane akudingeki - ukuhamba kwegazi ukunikeza kuncipha aorta amaphiko. Igazi roundworms elakhiwa ezihlukahlukene zemibala zokuphefumula.
Isimiso sezinzwa ulula namanje. Ekugcineni phambi somzimba izinzwa ganglion ezinkulu, njengamanje owenza umsebenzi zobuchopho. Isuka kusukela intambo emsipheni, okuyinto yakha ganglia elincane ingxenye yomzimba ngayinye - ekuqongeleleni izinzwa. Imiqondo ethulwa ngemehlo, emizimbeni chemical sensitivity futhi mechanoreceptors, okuyinto yasakazwa kulo lonke umzimba worm.
Annelids: izici ukukhiqizwa kabusha nokuthuthukiswa
Organisms yaleli qembu kungaba kokubili kwabobulili futhi hermaphrodites (lingandile kangako). Ngokwesibonelo, uhlu lokubhala ngobumfihlo oluvinjiwe has androgynous uhlelo zokuzala, kodwa kuyadingeka ukuze ukuzalanisa abantu ababili. Kungenzeka kokubili imvelo kanye ngokwethula isidoda eziteshini zesifazane kwangaphakathi.
Kuvela elinye iqiniso elithakazelisayo ukuthi izikelemu ihlukene nge izingxenye evelele bathambekele ukuvuselelwa okusheshayo futhi olunzulu. Ngenxa lokhu kwezinye izinhlobo zezilwane ejwayelekile ka ukukhiqizwa kabusha asexual. Ukuthuthukiswa eziphilayo ngokuqondile, ngaphandle baye bathi sebeshintshe ngokuphelele.
Kufanele kuqashelwe ukuthi indima annelids ngempela onohlonze. Ngokwesibonelo, owaziwa inyokane obangela aeration kwenhlabathi. Leli qembu kuhlanganisa futhi iminyundu, izibankwa, okuyinto avame ukusetshenziswa lapho kwenziwa imithi yesimanje. Inani Special has hirudin ezivezwa umnyundu, njengoba thins igazi futhi isetshenziswa anti-thrombosis nezinye izifo eziyingozi.
Inganekwane: ukuhlonza. Inganekwane ngokuvumelana Losev. definition basezinganekwaneni